कान्ता भट्टराईलाई धेरैले सोध्छन् 'मान्य ज्यू' हजुर कहिले बोल्नुहुन्छ?
काठमाडौं : असार १६ गते सांसद कान्ता भट्टराईले संसदमा बोल्ने क्रममा धेरै सांसदहरु हाँसे। हुनत उनले उठाएको विषय त्यति हाँसो उठ्दो थिएन। जनकपुरमा विवाहपूर्व नै दाइजोको रुपमा ६० लाख रुपैयाँ लिएर भाग्ने डाक्टरलाई कारबाही गर्न माग गरेकी थिइन्।
तर संसदमा बोल्ने तरिका भने गज्जबको थियो। कान्ता विषयमा प्रवेश गर्नुअघि एउटा संस्कृत श्लोक भनिन्। जसको नेपाली सारांश थियो- नारीको गरिमा पुरुषभन्दा हजार गुणा बढी हुन्छ।
त्यसदिन मात्र होइन उनी जहिले बोल्दा पनि संस्कृत श्लोकबाटै सुरु गर्छिन्। आफू बोल्दा कतिपय सांसदहरु हाँसेको पनि सुनेकी छन्। सांसद साथीहरु रमाइलो मानेकोमा उनलाई पनि खुशी लाग्छ।
'म बोल्दा उहाँहरु हाँस्नुहुन्छ। हाँस्नुको अर्थ मलाई नराम्रो ठानेर होइन। त्यहाँ एउटा उमंगको वातावरण सिर्जना हुन्छ' कान्ताले भनिन् ' एकदिन शिक्षामन्त्रीज्यूले मलाई अभिभावदन गर्नुभयो। मैले उहाँसँग संस्कृत शिक्षा गुरुकुललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेँ। गुरुकुल यस्तो शिक्षा हो जसले स्वयं रोजगारी सिर्जना गर्छ।'
सबै पार्टीका सांसद्ले मान्य ज्यू हजुर कहिले बोल्नुहुन्छ? भनेर भन्ने गरेको कान्ता बताँउछिन्। 'अहिलेसम्म शुरुमा बोल्दा संस्कृत श्लोक भन्छु त्यसपछि नेपालीमा बोल्छु। संस्कृत मेरो जननी हो। संसारकै भाषाहरुको जननी संस्कृत देववाणी हो' कान्ताले भनिन्, 'यसलाई कसरी छाड्न सक्छु म?'
संस्कृत अथाह ज्ञानको भण्डार
जनकपुरमा जन्मेकी कान्ताले नेपाली साहित्यमा एमएम, शिक्षा शास्त्रमा एमएड र संस्कृत साहित्यमा आचार्य गरेकी छन्। अहिले नीति शास्त्रमा पिएचडी गरिरहेकी कान्ता राज्यले विद्यालय तहमा संस्कृत शिक्षा हटाएका कारण नैतिकताको संकट परेको बताउँछिन्।
'यो शरीर खाली खानु, पिउनु, मोज गर्नु मात्र होइन। अध्यात्मको पनि ज्ञान लिनुपर्छ' कान्ता भन्छिन्, 'यसले मात्रृदेवो भवः। पितृ देवो भवः। आचार्य देवौ भवः अर्थात् आमा नै देवता हुनुपर्छ। भगवान भनेको पिता हुनुहुन्छ। गुरु नै ईश्वर हुन् भन्ने कुरा सिकाउँछ।'
जन्मदेखि मृत्युपर्यन्तका संस्कार र शिक्षा संस्कृतमा भएकाले यो शिक्षा सबैले बुझ्न आवश्यक भएपनि संस्कृतलाई ब्राह्मणको मात्र भाषाको रुपमा हेरिएकोमा कान्तालाई चिन्ता छ।
'संस्कृत अथाह ज्ञानको भण्डार हो। नेपालमा संस्कृतलाई हेयले हेरिन्छ। भारत सरकारले यसको संरक्षण गरेको छ। जर्मनमा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ', उनी भन्छिन्, 'वेद, उपनिषद्, पुराण, उपपुराण आदि सबै संस्कृतमै छ। भाषा कुनै व्यक्तिको होइन, सबैको हो। विश्वको जननी संस्कृतिप्रति सबैले सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ।'
राज्यले प्राथमिक तहदेखि नै संस्कृतलाई संरक्षण गर्नुपर्ने कान्ता बताउँछिन्।
महिलाको स्थान उच्च
कान्ता संसदमा महिलाका विषयमा बारम्बार कुरा उठाइरहन्छिन्। कान्ता नारीको स्थान कसैले पनि लिन नसक्ने बताउँछिन्। 'नारीको स्थान सदा उच्च छ। हामी पूर्वीय धर्मअनुसार चल्नुपर्दछ', उनले भनिन्, 'अन्य धर्मलाई पनि म सम्मान गर्छु। तर हाम्रो धर्ममा मात्र नारीलाई उच्च स्थान सम्मान दिइएको छ त्यो अन्य धर्ममा दिइएको छैन।'
कुनैपनि नारी आदर्शमय छवि, कर्मका कारण गर्दा सम्मानित हुने उनको बुझाइ छ। त्यस्तै आदर्श नारीको चरित्र अनुशिलन गरेर हरेक नारीले आफ्नो जीवन गौरवशाली बनाउनुपर्ने कान्ताको सुझाव छ।
'हामीले नारीको महिमा, गरिमा बताउन सकेनौं। नारी हाड मासु र रगतले मात्र बनेको होइन भनेर। यो त लक्ष्मी स्वरुपा हुन् भनेर हाम्रो शिक्षाले दिन सकेन हामीले बताउन सकेनौं' उनी भन्छिन्, 'नैतिक शिक्षा संस्कृत शिक्षा राज्यले हटायो। अब राज्यले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।'
अहिलेको शिक्षाले मातापितालाई वृद्धाश्रममा पुर्‍याएको भन्दै कान्ता चिन्ता व्यक्त गर्छिन्।
कांग्रेस छाडेर राप्रपाबाट सभासद
विद्यालयमा पढाउदै आएकी कान्ता भट्टराई २०७० मंसिरमा संविधानसभाभित्र छिरिन्। विद्यार्थीकालमा कांग्रेसबाट राजनीति गरेकी उनले कांग्रेसभित्र राम्रै छवि बनाएकी थिइन्। तर एकाएक राप्रपा नेपालको तर्फबाट सांसद बन्दा धेरैले आश्चर्य माने।
'म २०३६ सालदेखि कांग्रेसमा रहेर काम गरेको मान्छे। तर नेपालको गौरवपूर्ण पहिचान छाडेर मुलुकलाई संघीयतामा लगेका कारण कांग्रेस पार्टी त्याग गरेँ' राप्रपा नेपालमा पर्वेश गर्नुको कारणबारे कान्ताले भनिन्। २०६२/०६३ देखि नै कांग्रेसले नेपालको पहिचान छाडेको भन्दै असन्तुष्ट कान्ताले २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनबाटै राप्रपालाई भोट दिँदै आएकी थिइन्। तर औपचारिक प्रवेश भने २०७० सालमा मात्र गरिन्।
'नेपाललाई वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने, अखण्ड हुनुपर्ने र स्थानीय स्तरमा नै राज्य सुदृढ हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रा मुख्य तीन एजेण्डाहरु छन् । यसलाई हामीले छाड्न सक्दैनौं' उनले भनिन्।
अध्यात्म शिक्षालाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउने कान्ता यहाँका राजनितिज्ञले नेपालको गौरवशाली इतिहासलाई चिन्न नसकेको गुनासो गर्छिन्। 'राजनीति आफैंमा राम्रो हो। देशको मूल नीति नै राजनीति हो। राजनीति सही हुनुपर्छ। यसले धर्म छाड्नुहुदैन। धर्म कर्तव्य हो। जनताको सेवा गर्नु नै राजनीतिको मूल लक्ष्य हो' उनले भनिन्, 'त्यसैले राजनीतिमा धर्म प्रधान रुपमा रहनुपर्छ। धर्म विनाको राजनीति सफल मान्न सकिँदैन।'
२०७३ असार २५ गते थाहाखबरमा प्रकाशित ।